Home Wararka Hir-shabeelle oo maanta qabaneyso doorashada kuraas taala Beledweyne
Hir-shabeelle oo maanta qabaneyso doorashada kuraas taala Beledweyne
Maanta oo Sabti ah Guddiga maamulka doorashooyinka ee Hirshabeelle, waxaa lagu waddaa in ay qabtaan doorashada labo kursi oo ka mid ah kuraasta taala Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Kuraasta doorashadooda la qabanayo ayaa kale ah HOP#019 iyo HOP #059, kuwaas oo ay ku tartamayaan musharixiin dhowr ah iyo kuwii hore ugu fadhiyay.
Kursiga HOP#019, waxaa hore ugu fadhiyay Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali, halka kursiga HOP#059, uu hore ugu fadhiyay Samiiro Xasan Cabdulle, iyadoo kursigaas musharixiinta u tartamayo uu ka mid yahay gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer Faderaal Mowliid Mataan.
Musharixiin dhowr ah ayaa isku diiwaangeliyay u tartamida kuraastaan, kuwaas oo doonaya in ay ku guuleystaan hanashada doorashada kuraastaas.
Previous articleGuudlaawe oo la saftay Fahad iyo Farmaajo, kana soo horjeestay go’aanka Rooble
Next articleDowladda Turkiga oo taageertay Hawlgalka ATMIS ee Soomaaliya
[Deg Deg] Jubbaland, Puntland iyo Midowga Musharaxiinta oo ku dhawaaqay gole...
Muqdisho Askari dowlada fadaraalka katirsan ayaa dilay darawal baabuur